मनोज गजुरेलका पूर्व ‘अर्धाङ्गीनी’ले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले सबैकाे मन छोएपछि एकाएक यस्तो भयो!. – PathivaraOnline
Home > समाचार > मनोज गजुरेलका पूर्व ‘अर्धाङ्गीनी’ले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले सबैकाे मन छोएपछि एकाएक यस्तो भयो!.
admin November 8, 2020 November 8, 2020 समाचार	0
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेललाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पतालको आइसीयूमा उपचाररत उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ । उनलाई आइसीयुमा भर्ना गरेको समाचार पाएकी पुर्वपत्नी मिना ढकालले पनि निक्कै मर्मस्पर्शी संदेश लेख्दै उनको शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी थिइन । कतिपय मिडियाले गजुरेल गम्भीर अवस्थामा समेत लेख्न थालेपछि शुक्रबार राति अस्पतालबाटै सामाजिक संजालमा खबर गरे ।
फेसबुक मार्फत उनले आफूलाई निकै सुधार भएको र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद दिएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण भएका उनलाई श्वास – प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि बुधबार शसस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा पुर्यााइएको थियो। अस्पतालमा एक्सरे गरेर हेर्दा उनको फोक्सोमा निमोनिया भएको देखिएको एक चिकित्सकले जानकारी दिए । उनलाई कात्तिक १० गते कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
उनले आफुलाई कोरोना संक्रमण भएको बारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका थिए । यसैबीच गजु्रेलकी पूर्वपत्नी मीना ढकालले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा मनछुने स्टाटस लेख्दै भौतिक रुपमा टाढा भएपनि आफुले मनोजलाइ धेरै माया गर्ने बताएकी छिन् । उनले मनोज आईसियुमा उपचारारत छन् भन्ने समाचारले आफुलाई वि़क्षिप्त बनाएको बताएकी छिन् ।
रकम अभावमा क्यान्सरको उपचार नपाएर छटपटाउदै गरेका मीनको अपिलः तपाईहरुको सहयोगले बाँच्न चाहान्छु